Ralnweta Fiber N'uko Board
Eriri Glass N'uko Ngidi
Mkpuchi Akwa Wool
Ihe mkpuchi Glass Wool
Ihe mkpuchi ihe maka ebe mpụga
Ihe mkpuchi maka ebe ndị dị n'èzí N'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ihe mkpuchi pipeline dị n'èzí, nke nwere ike ịbụ roba, ajị ajị anụ, aluminium silicate, ajị ajị anụ, wdg. Ihe a kapịrị ọnụ ga-eji dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke akụrụngwa na ọkara ahụ pipeline na-ebugharị. ...
Gịnị na-emetụta arụmọrụ nke arụmọrụ nke mkpuchi ihe
A na-ekpebi ihe ndozi arụmọrụ nke ihe na-ekpuchi ọkụ site na nrụpụta nke ihe eji emepụta ihe. Obere ihe na-arụ ọrụ ọkụ ahụ, nke ka mma arụ ọrụ mkpuchi nke ọma. Ke ofụri ofụri, ihe ndị na thermal conductivity erughị 0.23W / (m · K) bụ cal ...
Glass Wool Products Brief Okwu Mmalite
Glass ajị na-emekarị kewara iko ajị chere na iko ajị osisi. A na-ejikarị ajị anụ ajị anụ ụlọ mee ihe n'elu ụlọ, elu ụlọ, na elu ụlọ maka mkpuchi mkpuchi. A na-ejikarị ogwe ajị ajị anụ ahụ na mgbidi mgbidi, dị ka mgbidi dị n'ime na mkpuchi mgbidi nke mpụga. Glass ajị ngwaahịa ...
Uru nke Beihua Mineral Fiber Board
Gịnị bụ uru nke anyị ịnweta eriri osisi? 1. fibernweta eriri osisi na-eji akwa ajị anụ dị elu dị ka isi akụrụngwa, 100% na-enweghị asbestos, ọ nweghịkwa uzuzu dị ka agịga. Ọ gaghị abanye ahụ mmadụ site na akụkụ iku ume na adịghị emerụ ahụ mmadụ. 2. Iji eriri mejupụtara na ...
A na-akpọ aha osisi nke osisi extruded polystyrene ụfụfụ, nke a makwaara dị ka bọọdụ XPS. Ekewara ụfụfụ polystyrene n'ụdị abụọ: EPS na-agbasawanye na XPS na-aga n'ihu. E jiri ya tụnyere osisi EPS, bọọdụ XPS bụ ọgbọ nke atọ nke ihe mkpuchi mkpuchi siri ike. Ọ meriri ...
Kedu Ngwá Akụrụngwa Ndị Na-enweghị Nri E Nwere Ike Jiri N'ime Thelọ Ọfịs?
site ha na 21-03-01
Na ọha mmadụ ugbu a, ebe dị n'èzí na-eme mkpọtụ. Ọ naghị adị mfe ịchọta ebe obibi dị jụụ. A na-enwe nnukwu mkpọtụ n’ime ụlọ na n’ime ụlọ. Yabụ, ezigbo ihe mkpuchi ihe ịchọ mma dị mkpa maka ụlọ, ọkachasị maka ọfịs gburugburu ...
Dobe Uche 2 × 4 Acoustic Ceiling 2 × 2
site ha na 21-02-03
Nha uko ụlọ dị iche iche site na mba rue mba. Iji maa atụ, na China, ụfọdụ taịl nile nke taịl nile bụ 595x595mm, ọ bụ metric size. Ọ bụ ezie na, mba ụfọdụ na-eji ngalaba ndị Britain, 2 × 2, ma ọ bụ 2 × 4, wdg.
Tụnyere Of N'uko Ihe
Enwere ụdị ụlọ ụlọ dị iche iche na ahịa. Oge ụfọdụ anyị ga-enwe mgbagwoju anya ụdị ụdị ihe anyị chọrọ ma mgbe ụfọdụ mgbe anyị nwetachara ihe ọmụma banyere ngwa ụlọ ndị a, anyị ka nọ n'ọgba aghara. Họrọ nke ziri ezi, ọ bụghị nke dị oke ọnụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe functi ...
Na-atụ anya iso gị rụkọọ ọrụ!ase